Uwe mkpuchi akpụkpọ ụkwụ nke ụmụ nwanyị
Jaketị na mkpuchi
Nke a bụ uwe mara mma nke ụmụ nwanyị na-enweghị atụ nke ejiri superfine fiber Pu ihe sịntetik mebere. Ultrafine PU synthetic leather bụ ọgbọ nke atọ nke akpụkpọ anụ na nke mmadụ mere. Nondị akwa a na - enweghị akwa nke nwere akụkụ atọ na meshed na - emepụta ọnọdụ maka akpụkpọ anụ sịntetị gafere karịa akpụkpọ anụ sitere n'okike. Ngwaahịa jikọtara na ọhụrụ mepụtara Pu slurry impregnation na oghere Ọdịdị na nhazi technology nke compound oyi akwa, na-egwuri microf ...
Nke a bụ uwe mara mma nke ụmụ nwanyị na-enweghị atụ nke ejiri superfine fiber Pu ihe sịntetik mebere. Ultrafine PU synthetic leather bụ ọgbọ nke atọ nke akpụkpọ anụ na nke mmadụ mere. Ngwongwo a na - achoghi nke ato ya na uzo ya meputara onodu nke akpukpo aru kariri nke kachasi nma n'ime ihe eji eme ya. Ngwaahịa ahụ jikọtara ya na PU slurry impregnation ọhụụ mepere emepe yana usoro mmepe na teknụzụ nhazi nke ngwakọta ngwongwo, na-egwuri microfiber nnukwu elu mpaghara yana imbibition mmiri siri ike. Nke a mere ka ọkasị mma ọkwa Pu sịntetik akpụkpọ anụ nwere ezigbo mma hygroscopicity na ezi collagen eriri eke akpụkpọ anụ pụta ụwa. N'ihi ya, n'agbanyeghị si esịtidem microstructure, ma ọ bụ ọdịdị udidi falling na nkịtị Njirimara na ndị mmadụ yi nkasi obi, wdg O nwere ike iji ya tụnyere ibu eke akpụkpọ anụ. Na mgbakwunye, nke ọkasị mma eriri sịntetik akpụkpọ anụ dị elu karịa eke akpụkpọ anụ na nguzogide kemịkalụ, ịdị n'otu ịdị n'otu, ime mgbanwe na nnukwu-mmepụta na waterproof, ebu ebu proofing na akụkụ ndị ọzọ. Ọzọ, ike dị iche iche mara mma nke akpụkpọ anụ sịntetik enweghị ike iji dochie anya ya. Anyị nyochaa si anụ ụlọ na mba ahịa, sịntetik Pu ihe nwekwara dochie n'okpuru-enweta ego eke akpụkpọ anụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu. Ojiji eji akpụkpọ anụ na akpụkpọ anụ sịntetik maka akpa, akwa, akpụkpọ ụkwụ, ụgbọ ala na ịchọ mma arịa ka esiwanyewanye na ahịa ahụ. Ngwa ya dị iche iche, ọnụ ọgụgụ buru ibu, ọtụtụ ọdịnala na ihe ndị ọzọ bụ akpụkpọ anụ nkịtị enweghị ike 'nweta.
Nke a jaketị PU, dị mfe ma mara mma na akwa lapelym na akwa pụrụ iche na ubu na nkwojiaka. Patternkpụrụ niile dị mma na nsụgharị dị iche iche ma ghara imebi ịma mma mara mma. A na-ekwu na ụmụ nwanyị niile ji mmiri mee ya, ọ bụ ụzọ ziri ezi iji juu iji merie enweghị ike. Ihu zipa na ngwa ndị ọzọ dị na agba na agba agba ochie iji mee ka uwe ahụ dum dị oke mma ma mara mma. Enwere mkpuchi n'ime. Enwere ike iju ya maka na ọ bụghị ihe ịchọrọ. Ihe a dị nro dị nro, akwa akwa polyester fiber. Ọ bụ ume na nkasi obi. Abụọ ahụ dị mfe mkpọchi uwe akpa. Dị mfe ma ọ bụghị nkenke. Uwe zuru ezu nke uwe ahụ dị mfe ma mara mma, ya na uwe pụrụ iche na-agbakwunye uwe na ubu. Enwere ike iwere ya dị ka uwe ejiji ejiji nke bara uru.
Nke gara aga: Uwe mkpuchi nke ụmụ nwanyị
Osote: Iesmụ nwanyị Biker jaket Pu
Igwe na-ekpuchi ikuku
Jackmụ nwanyị Jaketị
Gụnyere SizeLadies Biker jaket
Fashionmụ nwanyị Miniskirt Ejiji
Iesmụ nwanyị Biker jaket
Iesmụ nwanyị Biker jaket Pu
Uwe mkpuchi nke ụmụ nwanyị